प्रेम कहानी छ यस्तो घत्लादो !विश्वकै धनि बिल गेट्स दम्पत्ती हरेक रात सँगै भाँडा माझेर सुत्छन् « गोर्खाली खबर डटकम
२०७७ माघ ३० गते शुक्रवार प्रकाशित
धेरैले सोच्छन् धनि व्यक्तिहरुको जीवनल निकै तामझामका साथ बित्छ । उनीहरुले केही काम गर्दैनन् । घरमा काम गर्नेहरु प्रशस्तै हुन्छन् । प्रशस्तै आराम मिल्छ भन्नेहरुको लागि यो जोडी यस्तो उदाहरण बनेको छ ।
जसले आम मानिसले झै साधरण जीवन बिताएका छन् । उनीहरु प्रायः आफ्नो खाना आफै बनाउँछन् अनि सँगै भाँडा माझ्छन् ।मेलिन्डा पति पत्नीको काम बाँडफाँड गरेर गर्नुपर्ने कुरामा विश्वास गर्छिन् ।
गेट्स २८ सेप्टेम्बर १९५५ मा सियेटल, वाशिंगटनमा जन्मिए। उहाँ विलियम एच गेट्स सिनियर र मैरी मैक्सवेल गेट्सका छोरा हुन्। उनको पिता एक प्रमुख वकील थिए, र उनको आमाले पहिलो इन्टर्स्टेट ब्यानसिस्टम र युनाइटेड वे को
बोर्ड मा सेवा गरे। गेट्स को मातृ हजुरबुवा जे.डब्लु. मैक्सवेल, एक राष्ट्रीय बैंक अध्यक्ष हुन्। गेट्सको एक ठूलो दिदि, क्रिस्टी (क्रिस्टियन्नी) र एक सानो बहिनी, लिब्बी छन्।उनले १३ सालको उमेरमा एक निजी तैयारी विद्यालय, लेक्साइडाइड स्कूल मा दाखिला लिए। उनले आफ्नो पहिलो कम्प्यूटर प्रोग्राम यस मेशिनमा लेखे: टिक-टेक-टाइको कार्यान्वयन जसले प्रयोगकर्ताहरूलाई कम्प्यूटर विरुद्ध
खेल खेल्न अनुमति दिए। गेट्स मेशिन द्वारा मोहित थिए र कसरी सहि सफ्टवेयर कोड लाइ कसरी सधैँ राम्ररी कार्यान्वयन गर्ने सोच थियो। जब त्यो त्यो क्षणमा पछाडि झिकेर, उनले भने, “मेसिनको बारेमा कुनै निट चीज थियो।”
खुट्टा कालो भएर हैरान हुनुहुन्छ ? उसोभए चिनीको यो उपाय अपनाउनुहोस् !
आज शनिवार के गर्ने सोचमा हुनुहुन्छ?सुपा देउराली मन्दिरको दर्शन गरी राशिफल हेरेर लिनुहोस निर्णय